सधै मन्त्री पाउने भोजपुरबाट यसपाली को को मन्त्री बन्दै ? – silichung.com
सधै मन्त्री पाउने भोजपुरबाट यसपाली को को मन्त्री बन्दै ?
भोजपुरबाट मन्त्री हुने सम्भावित नामहरु
२२ पुष २०७४, शनिबार ०९:२४ 3246 पटक हेरिएको
भोजपुर । सधै मन्त्री पाउने जिल्लाको अग्रभागमा भोजपुर पर्छन । २००७ सालपछि भएको विभिन्न राजनीतिक कालखण्डहरुमा भोजपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले महत्वपुर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दै मन्त्री भएका छन ।
२००७ सालको प्रजातान्त्रको क्रान्तिपछि नारदमुनी थुलुङले महत्वपुर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दै मन्त्री भएका थिए । पञ्चायतकालीन अवस्थामा ध्यानबहादुर राई, डम्बरबहादुर बस्नेत र मुकुन्दबहादुर बस्नेत मन्त्री भएका थिए । २०४६ पछिको बहुदलीय व्यवस्थामा एमालेबाट हेमराज राई उद्योग मन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि शाहीकालीन अवस्थामा टंक ढकाल सुचना तथा सञ्चार मन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्री बनेका थिए । ०६२÷०६३ को जनआन्ेदालनपछि बनेको सरकारमा कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जलस्रोत मन्त्री बनेका थिए ।
पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि तत्कालीन खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारमा कांग्रेसको कोटाबाट शंकर कोइराला अर्थमन्त्री बनेका थिए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि एमालेबाट शेरधन राई सुचना तथा सञ्चार मन्त्री बने भने हाल कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्रीमा बहालवाला छन ।
भोजपुरमा जन्मनुभएका बिद्याादेवी भण्डारी पनि राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । भोजपुरको माटोले जन्माएका विद्यादेवी भण्डारी विद्यार्थीकालमा भोजपुरबाट राजनीतिक यात्रा आरम्भ गर्नुभएको थियो ।
भोजपुरबाट शुरु भएको २००७ सालको क्रान्ति र त्यसपछिको कालखण्डहरुमा राजनीतिक चेतनाको उजागरले भोजपुरका व्यक्तिहरु राजनीति उच्च तहमा पुगेका छन । देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र कालखण्डहरुमा भोजपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु मन्त्री बनेका छन । विकास हुन नसक्नुको कारणहरु एक ठाउँमा छ भने राजनीतिको हरेक कालखण्डमा भोजपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित मन्त्री भएका छन ।
यसपाली को को छन मन्त्री हुने लाइनमा
भोजपुरबाट मन्त्री हुने सम्भावित नामहरुमा एमालेबाट शेरधन राई, राजेन्द्र राई र जयन्ती राई छन भने माओवादी केन्द्रबाट सुदनी किराती समेत छन । बामगठबन्धन बाहेक सरकार निमार्ण भए ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की समेत मन्त्री हुने सम्भावित नेताभित्र पर्छन ।
एमालेबाट शेरधन राई प्रदेश नं १ को मुख्यमन्त्रीको चर्चामा छन भने राजेन्द्रकुमार राई प्रदेश नं १ को कुनै पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउदै मन्त्री हुने सम्भावना छन । जयन्ती राई निर्वाचित छैनन् तर उनी राष्ट्रिय सभामा पर्ने पक्का जस्तै छ । राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भए केन्द्र सरकारमा जयन्ती राई पनि मन्त्री हुने सम्भावना छ । महिला सहभागिता र महिलाको सिनियर लिडर भएको कारण पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुनुको साथै मन्त्री हुने सम्भावना पनि उतिकै छ ।
श्ेरधन राईले प्रदेश नं १ को मुख्यमन्त्रीको रुपमा आफैलाई दावी गर्दै आएको छ । भविष्यको मुख्यमन्त्री आफु नै हुने कुरामा ढुक्क छन । यदी पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता निर्वाचित भए शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुने कुरा पक्का छ । तर मुख्यमन्त्रीको लाइनमा एमाले सचिव भीम आचार्य समेत रहेको छ । सचिव आचार्य शेरधन राई भन्दा हरेक रुपमा सिनियर हुन । आचार्यलाई माधव नेपाल पक्षको समर्थन छ भने शेरधन राईलाई ओली पक्षको समर्थन छ । आचार्य पनि आफु संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुने कुरामा ढुक्क छन । आचार्य र राई को निर्वाचित हुने कुरा त्यो भविष्यले देखाउँछ । प्रदेश नं १ बाट निर्वाचित हुने प्रदेशसभामा निर्वाचित हुने राजेन्द्रकुमार राई अरु भन्दा सिनियर भित्र पर्छन । पार्टीभित्र सिनियर परेको कारण पनि राईको सम्भावना छ ।
मन्त्री हुनेमा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका सुदन किराती पनि पर्छन । युवा अवस्थामा राजनीतिमा फड्को मारेका राई जातीय सन्तुलन र भुगोललाई समेटदा राई मन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।